သိန်း (၂၈၉၀) တန် ကားကြီးနဲ့ ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို – Shwe Myanmar
Posted on January 8, 2021 by Shwe Myanmar
သိန်း (၂၈၉၀) တန် ကားကြီးနဲ့ ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ လူလေးလှရုံသာမက ပညာလည်းတတ်၊ အရည်အချင်းလည်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ ချမ်းသာတဲ့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းက ဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမခြေထော်ပေါ်သူမရပ်တည်လာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ တဖွဲဖွဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း နေခြည်ဦးက သူမကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့
ကားအသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်း Vlog အသစ်လေးကို အခုလိုပဲ ချပြလာပါတယ်။ “New Year, New Car, New Adventure !!! ဒီ Vlog လေးက နေခြည့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Car Shopping Vlog လေးပေါ့နော် … အခုဝယ်မယ့်ကားက နေခြည့်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ပထမဦးဆုံးဝယ်မယ့် ကားလေးလည်းဖြစ်လို့ နေခြည် မှန်းထားတဲ့ Budget နဲ့ ဘယ်လိုကားမျိုးရမလဲဆိုတာလည်း အရမ်းရင်ခုန်နေတယ်။ နေခြည် ငယ်ငယ်လေးထဲက
ကားတွေဆို အရမ်း Crazy ဖြစ်တယ်။နေခြည် ကျောင်းသွားတက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ နေခြည်စီးဖို့ဆိုပြီး ဖေဖေက ကားလေးတစ်စီးဝယ်ပေးတယ်။ အဲ့တုန်းကဆို နေခြည် အရမ်းပျော်တာ။ ဘဝမှာ ပထမဆုံးရတဲ့ကားလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် တစ်ယောက်ထဲလည်း စီးရမှာဆိုတော့။” “အခု နေခြည် အသက်အရွယ်တစ်ခု ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မိဘကို ပူဆာတာထပ် ကိုယ့်ဘာသာရှာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးလောက်
လိုချင်လာပြီ။ဖေဖေနဲ့ မေမေကိုလည်း ဒါ သမီးပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ထားတာဆိုပြီး ကြွားချင်တာလည်းပါတာပေါ့လေ အဲ့တာကြောင့် နေခြည်3နှစ်ကျော်4နှစ်နီးပါး အလုပ် အလုပ် အလုပ် ဆိုပြီး တောက်လျှောက်လုပ်ပြီး ရှာထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကားတစ်စီးလောက်တော့ ဝယ်တော့မယ်ကွာလို့ နေခြည် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ Vlog လေးကို အခုလိုပဲ ချပြလာပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ သူမအလုပ်စလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ (၄) နှစ်နီးပါးရှာဖွေလာတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ သိန်း (၂၈၉၀) တန် Range Rover ကားအသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး ဒီလိုမျိုး အဖိုးတန်ကားသစ်ကြီးကို ဝယ်နိုင်ခဲ့တာ အားကျစရာပါပဲနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတျတှခေဈြကွတဲ့ နခွေညျဦးကတော့ လူလေးလှရုံသာမက ပညာလညျးတတျ၊ အရညျအခငျြးလညျးရှိတဲ့ အမြိုးသမီးငယျလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးကတော့ ခမျြးသာတဲ့ မိဘအသိုငျးအဝိုငျးက ဆငျးသကျလာသူတဈယောကျဆိုပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ သူမခွထေျောပျေါသူမရပျတညျလာပွီး အောငျမွငျမှုတှေ တဖှဲဖှဲသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး နခွေညျဦးက သူမကိုယျတိုငျရှာဖှထေားတဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ ကားအသဈကွီးကို ဝယျယူခဲ့တဲ့အကွောငျး Vlog
အသဈလေးကို အခုလိုပဲ ခပြွလာပါတယျ။ “New Year, New Car, New Adventure !!! ဒီ Vlog လေးက နခွေညျ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Car Shopping Vlog လေးပေါ့နျော … အခုဝယျမယျ့ကားက နခွေညျ့ကိုယျပိုငျဝငျငှနေဲ့ ပထမဦးဆုံးဝယျမယျ့ ကားလေးလညျးဖွဈလို့ နခွေညျ မှနျးထားတဲ့ Budget နဲ့ ဘယျလိုကားမြိုးရမလဲဆိုတာလညျး အရမျးရငျခုနျနတေယျ။ နခွေညျ ငယျငယျလေးထဲက ကားတှဆေို အရမျး Crazy ဖွဈတယျ။နခွေညျ ကြောငျးသှားတကျပွီးပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာ
နခွေညျစီးဖို့ဆိုပွီး ဖဖေကေ ကားလေးတဈစီးဝယျပေးတယျ။ အဲ့တုနျးကဆို နခွေညျ အရမျးပြျောတာ။ ဘဝမှာ ပထမဆုံးရတဲ့ကားလညျး ဖွဈတယျ၊ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ တဈယောကျထဲလညျး စီးရမှာဆိုတော့။” “အခု နခွေညျ အသကျအရှယျတဈခု ရောကျလာတဲ့အခါကတြော့ မိဘကို ပူဆာတာထပျ ကိုယျ့ဘာသာရှာတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ ဝယျထားတဲ့ကားတဈစီးလောကျ လိုခငျြလာပွီ။ဖဖေနေဲ့ မမေကေိုလညျး ဒါ သမီးပိုကျဆံနဲ့ ဝယျထားတာဆိုပွီး ကွှားခငျြတာလညျးပါတာပေါ့လေ
အဲ့တာကွောငျ့ နခွေညျ3နှဈကြျော4နှဈနီးပါး အလုပျ အလုပျ အလုပျ ဆိုပွီး တောကျလြှောကျလုပျပွီး ရှာထားတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ ကားတဈစီးလောကျတော့ ဝယျတော့မယျကှာလို့ နခွေညျ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ Vlog လေးကို အခုလိုပဲ ခပြွလာပါတယျ။ နခွေညျဦးကတော့ သူမအလုပျစလုပျခဲ့တဲ့အခြိနျကတညျးက ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ (၄) နှဈနီးပါးရှာဖှလောတဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ သိနျး (၂၈၉၀) တနျ Range Rover ကားအသဈကွီးကို ဝယျယူခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးလညျး ငယျငယျလေးနဲ့ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျပွီး ဒီလိုမြိုး အဖိုးတနျကားသဈကွီးကို ဝယျနိုငျခဲ့တာ အားကစြရာပါပဲနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Previous PostPrevious “(၁၀)ဖိုးလောက် ပိန်သွားလို့” ဆိုပြီး ပုရိသတွေကြွေသွားအောင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တင်ပေး လိုက်တဲ့ မေပန်းချီဲ
Next PostNext မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ မြန်မာငွေ သိန်း (၂၀)နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် IPAD PROကြီးကို စပရိုက်အနေနဲ့ပေးလာတဲ့ ခင်ပွန်း ပြေတီဦးကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အူဝဲ..